RDC: Fangatahana Amin’ny Transparency International & Adihevitra Momba ny Fifidianana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Septambra 2017 16:08 GMT
(Marihana fa efa tamin'ny volana Mey taona 2006 no nivoahan'ny lahatsoratra tamin'ny teny Anglisy)
“Master of the Universe,” (Tompon'izao rehetra izao): fandrahonana an'i Kabila? Avy amin'i Etienne Ngandu
Nanaparitaka ny lahatsoratry AFP manambara ny fifidianana filoham-pirenena hatao ny 30 jolay ny UDPS Liege androany. Nahemotra herintaona ny fifidianana tamin'ny volana Jiona lasa teo ary tara kokoa noho ny fe-potoana 30 Jona notakin'ireo lalàna isan-karazan'ny tetezamita ny datin'ny 30 jolay.
Tany ampiandohan'ity herinandro ity, nanolo-kevitra tao amin'ny Prince du Fleuve du Congo ilay bilaogera Tony Katombe fa mangataka amin'ny Transparency International (T.I.) izy sy ireo mpiray tanindrazana ao amin'ny firenena sy any ivelany mba “hanadihady ny fiampangana an'i Louis Michel, William Lacy Swing, Aldo Ajello sy ireo tompon'andraikitra hafa iraisampirenena tamin'ny fitrandrahana tsy ara-dalàna ny harena an-kibon'ny tany tao Katanga, Kivu sy Kasai … Ny tanjona dia ny hitondra ny T.I (Transparency International)… mba hanamarina fa ireo lehilahy tandrefana ireo izay miasa any Kongo ho toy ao anatin'ny tobin'ny zanatany no mahatonga ny famolavolana sy ny fiorenan'ity rafitra feno kolikoly ity.
Nasain'ilay bilaogera Philippe Liondjo izay mitantana ny Le Prince, ny hafa, toa an'i MuanaCongo, nilaza hoe:
Hatramin'ny fiandohan'ity tetezamita ity, nanoratra hafatra an-jatony ho an'ireo solontenan'ny fiarahamonina iraisam-pirenena izahay. Ity vondrom-piarahamonina ity ihany no nanamora ny fanadihadiana izay manamarina amin'ny fomba tsy isalasalana sy marina fa voaroba ny firenentsika, indrindra fa voaraban'ny tarik'i Kabila … Raha tena tia ny firenentsika isika, dia maneke ny zava-misy marina. Ny hany andraikitra feno fitiavan-tanindrazana izay mendrika hatao ankehitriny dia ny revolisiona, na revolisionam-bahoaka na revolisionan'ny tafika na tsara kokoa dia ny fitambaran'ireo roa ireo.
Nandingana ilay resaka fanangonan-tsonia i Desire Katompa, ary niresaka tolona, mamaritra izany amin'ny fomba tsy mitovy amin'i MuanaCongo:
Ny tolona ihany no manafaka! Inona no atao hoe tolona? Ny tolona dia ny fifohazana maraina mba hiasa, ny tolona dia ny mba ho tsara indrindra amin'ny zavatra ataonao, ny tolona dia ny manao izay vita isan'andro mba hampandroso ny zavatra tena tiantsika.
Toa mihevitra izy fa ny fandraisana anjara amin'ny fifidianana, fa tsy amin'ny tolona mitam-piadiana no vahaolana:
Ny fifampiraharahana dia miteraka marimaritra iraisana, ny fifidianana dia mitarika ny fibaboan'ny resy. Andeha hiezaka ny ho mpandresy mba hampanaiky ireo mpifanandrina amintsika. Manana fahafahana hanakana an'i Kabila sy ny PPRD amin'ny lalan'izy ireo isika. Aoka isika tsy ho variana amin'ny nofo, fa hijery ny zava-misy marina, ary indrindra handinika ny fanahintsika sy ny adintsika, mila mitondra izany ho an'ireo Kongoley 25 tapitrisa isika.
Nandray anjara ihany koa i Philippe Liondjo, mpanorina ny Le Prince :
Ny ao an-tsaiko, fanampiny amin'ny tolontsika ny fisantarana andraikitra nataon'i Tony Katombe … Miombon-kevitra amin'izany aho [ny fitakiana amin'ny T.I.] ary koa miombon-kevitra amin'i Badibanga amin'ny revolisionam-bahoaka.
Tamin'ny fanamarihana maivana kokoa, nandefa sary misy ny faritanin'i Kasai, faharoa tamin'ity taona ity i Etienne Ngandu ao amin'ny Le Renouveau Congolais . Ny sary iray dia izay mety ho mpifaninana ara-politika amin'ny PPRD sy ny mpanohitra, antsoina hoe “Master of the Universe” (Tompon'izao rehetra izao):
Tous les politiciens kinois n'ont qu'à bien se tenir. Voilà le redoutable adversaire politique de Lukalaba qui va tous les battre. Sur son tableau figurent déjà tous les titres qu'il porte: PAD MIBA, Gouverneur Kasaï-Oriental, President RDC, Président Union Africaine, Maître du monde, etc… Bref un fou qui amuse les gens au marché de Lukalaba.
Mila mitandrina ireo mpanao politika ao Kinshasa. Handresy azy rehetra ny mpifaninana ara-politika farany avy amin'i Lukalaba. Ao amin'ny tabilaony, efa nanoratra ny anarana rehetra ananany izy: PAD MIBA, Governoran'i East Kasai, Filohan'ny DRC, Filohan'ny Vondrona Afrikana, Tompon'izao rehetra izao, sns. … Eny, olona adala mampiala voly ny vahoaka eny an-tsena ao Lukalaba.